बिहे गर्ने उमेरमा दुई सन्तानकी आमा ! सानैमा बिहे गरेकामा अहिले आएर पछुतो | Rajmarga
बिहे गर्ने उमेरमा दुई सन्तानकी आमा ! सानैमा बिहे गरेकामा अहिले आएर पछुतो
जाजरकोट । जुम्ला जिल्लास्थित स्थानीय कनका सुन्दरी–१की विनिता भण्डारीको भर्खर बिहे गर्ने उमेर भयो । पाँच वर्ष अघि विवाह गरेकी उनी अहिले २० वर्षकी हुँदा दुई सन्तानकी आमासमेत भइसकेकी छिन् ।
कलिलै उमेरमा विवाह गर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । उमेर नपुग्दै गर्भवती हुँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर हुनाका साथै त्यस्ता अधिकांश महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या देखिने गरेको छ । उमेर नपुग्दै गरिने विवाहका कारण सम्बन्धविच्छेदका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । सानैमा बिहे गर्ने केही वर्षपछि श्रीमान्ले सौता हाल्ने र त्यसपछि सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको पाइएको छ । – हेमन्त केसी /रासस
Previous post: टिममा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? एक जना समझदार व्यक्ति छ भने यस्तो हुन्छ असर
Next post: कासानोभाः प्रेमी, ठग, जासुस र लेखक, उनीप्रति विवाहित/अविवाहित महिला किन हुरुक्कै हुन्थे ?